HR - 420 - Lawula amaCannabis njengo-Alcohol Alcohol | Ukulungiswa Kwendlu - 420
HR 420 - Lawula amaCannabis afana Notshwala
H $ 420 - Lawula i-Cannabis Njengo-Alcohol utshwala
Yini eyenza HR 420 yenzani?
Impendulo: Lawula amaCannabis afana notshwala ngo:
Hambisa i-Cannabis kuMthetho Wezinto ezilawulwayo
Nweba i-ATF ukufaka i-Cannabis
Lungisa ubugebengu obuningi be-federal obuhlobene ne-cannabis
Ukulungiswa Kwendlu - 420
NgoJanuwari 9, 2019, u-Oregon Congressman, u-Earl Blumenauer, wethule umthetho obizwa ngeRegoda Marijuana Like Alcohol Act. Uma kudlulile, kuzoqeda ukwenqatshwa kwensangu ebumbayo bese kudluliselwa insangu e-Bureau of Alcohol Firearms Tobacco & Explosives (ATFE).
Ummeli Wezezimboni zeCannabis:
Uma unemibuzo mayelana nokwakha noma ukusebenza ngebhizinisi lakho le-cannabis - thintana nathi ihhovisi labameli e-peoria, e-Illinois namuhla ukuthola usizo ku- (309) 740-4033.
Rep. Blumenauer Ukhuluma nge-HR 420
"ICannabis Caucus ibingeyokuqala yohlobo lwayo ukwakha inkundla yezikhulu ezikhethiwe ukuthi zisebenzisane nezindlela zokubhekana nemithetho yensangu yethu ephelelwe yisikhathi" kusho Phendula uBlumenauer. "ICongress ihambisane kahle nabantu baseMelika nge-cannabis lapho ukuxhaswa kwezwe nse kwezomthetho kuhulumeni kugcwele njalo. Sabona izifundazwe eziningi zisiya emthethweni ngoNovemba wangonyaka owedlule."
ICannabis Caucus akuyona nje inkululeko evela eWest Coast, njenge-Oregon's Blumenauer, kodwa futhi namalungu eCongress aqhamuka kulesi siqhingi, afana neReps. UDave Joyce (R-OH) noDong Young (R-AK).
Ngabe kungenzeka kanjani ukuthi u-HR 420 abe ngumthetho?
Ngokunokwenzeka kungenzeki kakhulu - sekuvele nezindleko ezi-5 ze-cannabis kuCongress. Ngakho-ke kungukusondela kweqiniso impela, kepha uma uhulumeni wamanje evaliwe, nokhetho lukamongameli lusasele iminyaka embalwa. Abameli beCannabis kungenzeka bathathe isihlalo esingemuva ezintweni ezinobuwula ezifana neRussia, iWall, nanoma yini enye ethinta izihloko ngaphansi kukaMongameli uTrump osele iminyaka emi-2.